Ny Epistily nosoratan' i Jakoba na Epistola nosoratan' i Masindahy Jakoba na Taratasy nosoratan' i Masindahy Jakoba dia boky ao amin' ny Testamenta Vaovao ao amin' ny Baiboly kristiana izay isan' ireo atao hoe epistily. Mitonon-tena ho i Jakoba ny mpanoratra azy ary nosoratany "ho an' ny foko roa ambin'ny folo" izany. Isan' ireo atao hoe Epistily katôlika io epistily io noho izy tsy natokana ho ana fiangonana iray fa ho an' ny fiangonana sy ny olona rehetra. Tokony ho teo anelanelan' ny taona 49 sy 132 no nanoratana azy. Tamin' ny taonjato faha-2 vao nekena ho isan' ny kanonan' ny Baiboly kristiana tanteraka ny Epistilin' i Jakoba na dia efa nampiasain' ny ankamaroan' ny fiangonana kristiana ankapobeny aza izy talohan' izany fotoana izany.
Manolotra fampianarana sy fampiharana ny fivavahana kristiana eo amin' ny fiainana andavanandro io epistily io. Ny Kristiana dia entaniny mba hikatsaka sy hifidy ny faharetana, izay "fahendrena avy any ambony" (Jak. 3.17), ny fanetren-tena sy ny "fivavaky ny finoana" (Jak. 5.15). Ilaina izany satria ny harem-be sy ny fiteny feno fireharehana ary ny fialonana sy fifampiandaniana (Jak. 3.14) dia mitondra mankany amin' ny faharatsiana. Ny finoana kristiana dia ahafahan' ny Kristiana manohitra ny fakam-panahy na dia izay farany mafy aza. Nefa izany finoana izany dia tokony hosedraina tsy ankijanona, satria ny finoana tsy misy asa dia finoana maty (Jak. 2.17).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Epistily_nosoratan%27i_Jakoba&oldid=1010366"
Voaova farany tamin'ny 28 Martsa 2021 amin'ny 04:59 ity pejy ity.